Ambatoboeny: tratra ny andian-dahalo “tarika Barinjaka”, anisan’ireo nitetika zandary tao Anjiajia | Région Boeny
Tratra tao amin’ny fokontanin’Antsoherinakanga kaominin’ambanivohitra Anjijia, distrikan’Ambatoboeny ny zoma 23 septambra 2016 maraina tokony ho tamin’ny enina ora ireo dahalo rain-dahiny atao hoe tarika Barinjaka.
Noho ny firogatry ny asan-dahalo tato ho ato taty Anjijia, Ankazoabo ary ny manodidina an’Ambatoboeny dia nanapa-kevitra ny ao anivon’ny kaompanian’ny zandarimaria ao an-toerana ny hanao hetsika manokana hiadiana amin’ny asa ratsin’izy ireo.
Taorian’ny fanenjehana nataon’ny mpitandro filaminana dia vokatra tsara no azo satria voasambotra ireto olon-dratsy izay efan ikoizan’ny be sy ny maro eny amin’ny manodidina, fantatra amin’ny anarana hoe tarika Barinjaka izay nahitana lehilahy telo sy vehivavy iray miaraka amin’ny fitaovam-piadina sy ody gasy maro.
Rehefa natao ny fanadihadiana dia fantatra fa anisany tamin’ireo nitetitetika nahafaty ilay zandary mpiana-draharaha sy namono ilay zandary sefo ary tompon’omby tao Anjiajia, roa volana lasa izay, ny iray tamin’ireto olon-dratsy ireto. Nandray anjara ihany koa tamin’ny halatr’omby izay nahafatesan’olona iray ny 04 aogositra lasa teo, tao amin’ny kaominina Akijabe sy Andranomamy, samy ao amin’ny distrikan’Ambatoboeny hatrany.
Natolotra ny fampanoavana ao amin’ny Fitsarana Maevatanàna, faritra Betsiboka ireto dahalo rain-dahiny ireto, ary fanirian’ny mponina ny hanomezana sazy mifanaraka amin’ny heloka vitan’izy ireo: “Tsy mandry fahalemana izahay noho ny asa ratsy ataon’izy ireo. Mangataka ny fahendren’ny Fitsarana ny mba tsy hamotsorana azy ireo satria matahotra izahay ny hanaovan’izy ireo valifaty raha toa ka votsotra indray ireto olon-dratsy”, hoy ny mponina.
Mbola mitohy ny hetsika manokana iadiana amin’ny asan-dahalo ankehitriny ny ao amin’ny faritra Ambatoboeny sy ny manodidina ka nanao antso avo ny Komandin’ny kaompanian’ny zandarimaria ao an-toerana, ny kapiteny Razanaparany Félix, ny mba hahamailo lalandava ny vahoaka ary mangataka azy ireo hiara-hiasa hatrany amin’ny mpitandro filaminana hiadina amin’ny fangalaran’omby arahina vonoan’olona ataon’ireo dahalo